Aagan Fm कुखुरा ब्यवसायमा जम्दै सम्मानको परीवार ।
बिर्तामोड झापा , कार्तिक २९ । आर्थिक अभाब र धेरै पैसा कमाउने अनि आफ्ना् जिवन स्तरलाई सहज बनाउने उद्देश्यले पछिलो समय बैदेशिक रोजगारको सिलशिलामा नेपाली युवाहरु बिदेशिन बाध्य छन् । तर स्वदेशमै पनि मेहनत र परिश्रम गर्ने हो भने मनग्य धनर्जन गर्न सकिन्छ , त्यस्तै एक पात्र हुनुहुन्छ, झापा अर्जुनधारा ६ निवासी सम्मान श्रेष्ठ ।
श्रेष्ठको एक कुखुरा फारम छ , जहाँ उहाँले सञ्चालनको शुरुवाती चरणमा करिब १५ लाखँको लगानी गर्नुभयो । ५ सय कुखुरा लगाएर फारम खोलेका श्रेष्ठले लगानि बढाएर हाल ३५ लाख सम्म पुर्याउनुभएको छ । त्यसबाट उहाँ रामै्र आम्दानी लिरहनुभएको उहाँ बताउनु हुन्छ ।
फारममा बिभिन्न ५ प्रजातिको कुखुराहरु रहका छन् । लोकल कुखुराका साथै टर्कि , लेयर , ब्रोईलर ,गिरीराज र बट्टाई लगायत प्रजातीका कुखुरा श्रेष्ठको फारममा पाईन्छन् । श्रेष्ठको परिवारमा पाँच जना जना हुनुहुन्छ । सवैको सहकार्य रहेको यस व्याबसायबाट एकजालाई रोजगारको अवसर समेत प्रदान गर्नुभएको छ श्रेष्ठले ।
नेपाल प्रहरीका असई मार्फत देश र जनताको सेवा समेत गरीरहेका श्रेष्ठलाई , यहिँ पेशामा मात्र सिमीत रहिरहन मनले मानेन् । परीवारको आर्थीक अवस्थालाई थप समृद्ध बनाउँदै बाकिँ सदस्यहरुको खाली समयलाई सदुपयोग गर्ने सोच उहाँमा पलायो । श्रेष्ठको फारममा हाल २५ सय हाराहारीम कुखुरा हुर्किरहेका छन् । एक पटकमा उहाँले १ हजारदेखी १५ सय वटा चल्ला खरीद गरी फारममा लगाउनुहुन्छ । ह्याचिङ मेसीन आफुसँग नभएकाले कारण आफैले कुखुरा उत्पादन भने गर्नुहुन्न ।
यस व्याबसायबाट श्रेष्ठले मासिक खर्च कटाएर १ लाख ५० हजार रुपया सम्मको आम्दानी लिईरहनुभएको छ । आगामी दिन ह्याचिङ मेसीन खरीद गरी आफै कुखुरा उत्पादन पनि गर्ने उहाँको योजना रहेको छ । व्याबसायीहरुको प्रोत्साहनका निम्ती बिभिन्न किसिमको तालिम तथा उचित प्राबृदीक सम्बन्धी ज्ञानको ब्यावस्था सरकारले गर्ने हो भने युवाहरुले स्वदेशमै पनि केहि गर्न सक्ने उहाँको भनाई छ ।
रोपे के फल्दैन र ? गरे के हुन्न र ? आखिर जे गर्ने हो, सो कामलाई मनदेखि नै गर्ने हो भने र यस्लाई निरन्तरता दिने हो भने स्वदेशमै पनि परीवारसँग रम्दै आफूले चाहेजती आम्दानी लिन सकिने, श्रेष्ठले गरेको कामबाट प्रमाणीत भएको छ ।